မြင့်မားသော ပိုးသတ်ဆေးအဖြူ ရောင်စုံ အစားအစာ အဆင့်...
ဆပ်ပြာမွှေးရနံ့ Ethyl Phenyl Acetate CAS No: 101-97-3
အရောင်ဆိုးထားသောစက်မှုလုပ်ငန်း Sodium alginate Thickener
guanidine ပိုးသတ်ဆေး polyhexamethylene biguanide2...
oxygenerator အတွက် Lithium အမျိုးအစား Molecular Sive usd
ဆေးဝါးကြားခံ 3′-Nitroacetophen ...
ဆေးဝါးအလယ်အလတ် Diethyl oxalate CAS No. : ...
ဆေးဝါးအလယ်အလတ် Histamine Dihydrochlorid ...
ဆေးဝါးအလယ်အလတ် Glutaric Anhydride CAS N ...
အစားအစာဖြည့်စွက်ပြောင်းပြောင်း Inositol ၉၈% အမှုန့် - Inos ...
မျိုး -Inositol 98%
Paraformaldehyde ၉၆% ၃၀၅၂၅-၈၉-၄
anti-တွင်ပျော်ဝင်နေသောရေမြှုပ် extinguishing အေးဂျင့် 6% S ကို / AR
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ္ဒရာ၊ မြေ
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: 500 MT/လ
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ PDF အဖြစ်ကူးယူပါ
ထုပ်ပိုး: 200kg / durm
productivity: 500 MT / လ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, မြေ
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 500 MT / လ
HS Code ကို: 38130010
Anti-ပျော်ဝင်များ၏ 6% type ကို အမြှုပ် မီးသတ်ဘူးအေးဂျင့် အေးဂျင့် extinguishing အလွန်ထိရောက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတမီးဖြစ်၏။ ယင်း၏ဝိသေသတို့သည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရေမြှုပ်ဟာဝင်ရိုးစွန်းအရည်လောင်စာရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအကာအကွယ်ရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး, ရုပ်ရှင်ပျက်စီးခံရခြင်းမှအထက်မြှုပ်ကာကွယ်ရန်နှင့်အရှင်မီးသတ်ဘူးတစ်အခန်းကဏ္ဍနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာဝင်ရိုးစွန်းအရည်လောင်စာမီးငြိမ်းအေး, ဒါပေမယ့်လည်းရေနံလောင်စာမီးငြိမ်းအေးနိုင်ပါတယ်မသာ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အရည်ပျော်ပစ္စည်းမီး extinguishing nonpolar အရည်ပျော်ပစ္စည်းမီးနှင့်ARⅠBမီးအဆငျ့ⅢC extinguishing မီးငြိမ်းမသတ်။ ဒါကြောင့် multi-functional ဖြစ်စေသဘာဝရှိပါတယ်။
အလုပ်အမှုဆောင်နျ Standard အရေအတွက်: GB15308-2006 " အေးဂျင့် extinguishing မြှုပ်မီး "
အချိုးအစား (20 ℃ ), g / cm3
PH သည် (20 ℃ )
မြင်နိုင် stratification နှင့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်းမရှိပါ
F ကို luidity
စီးဆင်းမှုစံရည်ညွှန်းဖြေရှင်းချက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်
အဆိုပါ eigenvalue ကနေသွေဖည် 1.0 သို့မဟုတ်မ eigenvalue 20% ထက် သာ. ကြီးမြတ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်
25% ရေနုတ်မြောင်းအချိန် .Min
အဆိုပါဝိသေသတနျဖိုးကနေသွေဖည် 20% ထက်မပိုဖြစ်ပါတယ်
အီး xtinguishing အချိန် (acetone), မိ
anti-ကိုမီးရှို့အချိန် (acetone), မိ
, မိအချိန် (120 # အရည်ပျော်ပစ္စည်းရေနံ) Extinguishing
ခိုင်မာတဲ့သွန်း ≤ 3, နှေးကွေးနေသွန်း ≤ 5
anti-ကိုမီးရှို့အချိန် (120 # အရည်ပျော်ပစ္စည်းရေနံ), မိ
အနှေးလွှတ်ပေးရန် ≥ 10
4 - eigenvalue အတွင်း º
operating အပူချိန်, ℃
ပွိုင့် ~ 40 +5 အေးခဲနေသော
အေးဂျင့် extinguishing မီးမီးရောစပ် 6:94 အချိုးအမြှုပ်များကစနစ်နှင့်လတ်ဆတ်တဲ့ရေ extinguishing နိမ့်မြှုတ်မီးအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်ကြီးမားဓာတုစက်ရုံများ, ဓာတုဖိုင်ဘာစက်ရုံများ, ရေနံကုမ္ပဏီများ, ဓာတုထုတ်ကုန်ဂိုဒေါင်မီးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အခြားဒေသများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီထုတ်ကုန်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, Non-အဆိပ်သင့် non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး, မျက်စိသို့မဟုတ်အရေပြားသို့ဖြန်းကဲ့သို့သောရေနှင့်ဆေးကြောပါ။
ဒါကမီး-extinguishing အေးဂျင့်စတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက် 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပူချိန်မှာနှင့်၎င်း၏နိမ့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုအပူချိန်အထက်သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်နှစ်နှစ်ကာလကိုတံဆိပ်ခတ်နှင့်အထက်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အေးဂျင့်ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Extinguishing စံပြမြှုပ်ရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ အားလုံး Anti-တွင်ပျော်ဝင်နေသောရေမြှုပ်ငြိမ်းအေးအေးဂျင့်ရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့အမြှုပ်ငြိမ်းအေးအေးဂျင်အမျိုးအစားများ၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ကုန်ပစ္စည်း Categories: မီးသတ်သမား Powder
ယခင်: high-သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကယ်လစီယမ်ကလိုရိုက် granular / အမှုန့်
နောက်တစ်ခု: Ammonium လူမီနီယမ် sulfate
အေးဂျင့် 90% extinguishing ABC ရုပ်သံခြောက်သွေ့တဲ့အမှုန့်မီး
အေးဂျင့် extinguishing 3% ရေ-ဖွဲ့စည်းမြှုပ်မီး
အေးဂျင့် extinguishing ABC ရုပ်သံခြောက်သွေ့တဲ့အမှုန့်မီး (50%)
အေးဂျင့် extinguishing ABC ရုပ်သံထူးခြှနျအမှုန့်မီး
အေးဂျင့် extinguishing high-quality ABC ရုပ်သံအမှုန့်မီး
ရေတွင် ဆိုဒီယမ် thiosulfate ကို အသုံးပြုခြင်း...
Sodium thiosulfate ကို တစ်ပတ်အတွင်း ဖြည့်သွင်းခြင်း။
ရုရှားနှင့် ယူကရီးယားကြား စစ်ပွဲအခြေအနေ...
ဘာကြောင့် polydextrose ကို သင့်ဆီ ထည့်ဖို့ စဉ်းစားနေတာလဲ...
monosodium glutamate 40 mesh ထုပ်ပိုးခြင်း။